आज यो वर्षको दोस्रो चंद्रग्रहण,कुन राशिफललाइ सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्नेछ ? - A complete Nepali news portal based on news & views
आज यो वर्षको दोस्रो चंद्रग्रहण,कुन राशिफललाइ सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्नेछ ?
२३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १७:२१ June 5, 2020 Buddha Sharan
२३ जेष्ठ ,काठमाडौँ। ५ जुन अर्थात् आज राती यो वर्षको दोस्रो चंद्र ग्रहण हो। यो ग्रहण आज राती नेपाली समय अनुशार ११:३० ग्रहण हुनेछ र भोलि बिहान २:४९ मा समाप्त हुन्छ। ज्योतिस विज्ञानका अनुशर यस चन्द्रग्रहणले मानव जीवनमा कस्तो असर पार्छ र यस ग्रहणले कुन व्यक्तिलाई बढी असर गर्छ भन्ने आकलन गर्छ ।
जोतिस शास्त्रका अनुशार यो छायाँ ग्रहण वृश्चिकमा हुनेछ। राहु आठौं घरको बिचमा वृश्चिक राशिको साथ सर्दै छ। राहुलाई संक्रमण, रोग र रोगहरूको कारक ग्रह मानिन्छ। राहु आठौं घरको भित्र राशिको चिन्हको साथ आफ्नो प्रभाव दिन सक्षम छैन र भ्रष्ट अवस्थामा हुन्छ। यो ग्रहणको बखत पनि, राहुले आफ्नो राम्रो प्रभाव देखाउन सक्दैन, जसका कारण मानिसहरूलाई केही समस्या हुनेछ।
वृश्चिकमा ग्रहणको कारण, चन्द्रग्रहणले यस राशिका मानिसहरूलाई ठूलो असर पार्नेछ। यस राशिका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नु पर्छ। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूले यस ग्रहणमा विशेष ध्यान राख्नु पर्छ।
भारत लगायत स्थानबाट देखिने ग्रहण नेपालमा भने आज नदेखिने हुदाँ पात्रोमा उल्लेख नहुने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदश्य जोतिस दैवज्ञ किर्ति मदन जोशी बताउनु हुन्छ । उहाका अनुशार ग्रहण नदेखिने भएको ले बिधि शास्त्रअनुशार बार्न नपर्ने बताउनु हुन्छ ।
कोरोनाका कारण सुर्खेतमा २८ वर्षीय युवकको मृत्यु, मृतकको संख्या ११ पुग्यो
थप ३२३ नयाँ संक्रमित थपिए, संक्रमितको संख्या ३२३५ पुग्यो